ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာခက်သီ (လယ်)။ (မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ)
ကဗျာဆရာ ခက်သီဟာ သက်သေအထောက်အထားမရှိဘဲ အင်အားအလွန်အကျွံသုံး ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင် သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို ပြန်ရချိန်မှာ ပြင်းထန်လှတဲ့ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ ဒဏ်ရာ၊ ဒဏ်ချက်အမြောက်အများကို တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူ မချောစုက ဗွီအိုအေကိုပြောပါတယ်။ ရွှေဘိုက ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ မိဘတွေအိမ်ကို ရောက်နေချိန် ကဗျာဆရာ ခက်သီကို မတ်လ ၈ ရက်နေ့ ညနှောင်းပိုင်းမှာ အာဏာပိုင်တွေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပြီးနောက် နောက်နေ့ မနက်မှာ သူ့ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုပဲ ပြန်ရခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်နဲ့ ပက်သတ်လို့ ဇနီးဖြစ်သူ မချောစုကို မအင်ကြင်းနိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
မအင်ကြင်း။ ။ မချောစုရဲ့ ခင်ပွန်း ကဗျာဆရာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှာ ဖမ်းဆီးချိန် ၂၄ နာရီအတွင်း သူဘယ်လို ဖြစ်သွားသလဲဆိုတာကို ပြောပြပါရှင့်။
မချောစု။ ။ ၈ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ အဲဒီ စစ်ကားတွေ၊ ရဲကားတွေနဲ့ လာခေါ်တယ်ရှင့်။ ကျမရယ်၊ ကျမခဲအိုရယ်၊ ကျမခင်ပွန်း ကိုခက်သီရယ် သုံးယောက် ခေါ်သွားတယ်။ ခေါ်သွားပြီးတော့ စခန်းရောက်တော့ ကျမတို့ကို တနေရာစီပေါ့... ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဘာတွေ ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ ကျမကို တနေရာမှာ စစ်တယ်။ ကျမခဲအိုကိုကျတော့ တနေရာမှာ မေးတယ်။ ကိုခက်သီကိုကျတော့ တနေရာကို ခေါ်သွားပြီးမေးတယ်။ မေးပြီးတော့ ညကတည်းက ခေါ်သွားတာပေါ့နော်။ နောက်နေ့ ၁၀ နာရီကျော်၊ ၁၁ လောက်ထင်ပါတယ်... ကျမကို အပြင်ခေါ်ပြီးတော့ မေးစရာရှိလို့တဲ့။ ဟုတ်ကဲ့လို့ဆိုပြီးတော့... ကျမက ကျမကို စစ်မေးမယ်လို့ပဲ ထင်တာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအရာရှိကကျတော့ . (ကဗျာဆရာခက်သီ နာမည်အရင်းက ကိုဇော်ထွန်း)... ကိုဇော်ထွန်းက မုံရွာဆေးရုံရောက်သွားပြီတဲ့... ကျမက ဆေးတွေ၊ ဘာတွေ ကုလို့ရအုံးမယ်ထင်တာ။ ဒါပေမဲ့ မုံရွာသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့ သူတို့ ရဲနဲ့ လွှတ်လိုက်... ကျမတယောက်တည်းကို ခေါ်ပြီးတော့။ ကျမက ဆေးရုံစောင့်ရအုံးမယ်ထင်လို့ အဝတ်အစားလေး ယူပါရစေလို့ ဆိုတော့... မယူနဲ့တော့တဲ့ သွားလိုက်တော့တဲ့.... အဲဒီရဲမှူးလား၊ မြို့နယ်မှူးလားတော့ မသိဘူး။ သေမယ်ဆိုရင်တောင် သူ့ထိုက်နဲ့ သူ့ကံဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ကျမ ရင်ထဲလန့်တော့ လန့်သွားတယ်။ ဟုတ်ပါ့မလားလို့... ဘုရားစာရွတ်ပြီး လိုက်သွားလိုက်တာ။ ဟိုလည်းရောက်ရော မုံရွာဆေးရုံ အဝိုင်းပတ်နားလေးမှာ ကားတစီးက လာကြိုတယ်ရှင့် ရှေ့ကနေ လမ်းပြပြီးတော့ ကျမတို့ကို။ ဆေးရုံလည်းရောက်ရော ကိုခက်သီရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ထုတ်ရအောင်လို့တဲ့ လက်မှတ်ထိုးပေးပါလို့ ဆိုပြီး ကျမကို လာခိုင်းတာတဲ့။ ကိုခက်သီကို သူတို့ဘာသာသူတို့ သဂြိင်္ုလ်ဖို့လုပ်ထားတာ။ ၂ နာရီ မီးရှို့သဂြိင်္ုလ်မှာဆိုတော့။ ကျမကလည်း မဖြစ်ဘူးလို့။ သူ့အဖေကလည်း ၂၆ ရက်နေ့ကမှ သေထားတာ။ အခုလောလောဆယ် သူ့အမေကို ကျမက ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမှာလဲလို့။ သူ့အမေကလည်း မျက်လုံးက မျက်မှန်ချွတ်လိုက်ရင် လုံးဝ အကန်း၊ ဘာမှ မမြင်ရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုအမေကို ကျမက ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ရမှာလဲ။ သူ့သားကို မေးလာရင် ကျမက ဘယ်လို ဖြေရမှာလဲ။ သူတို့ ခေါ်သွားတုန်းက လူက အကောင်းကြီး၊ ပြန်လာတော့မှ ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက။ သူတို့ပြောတဲ့ မိုင်းဆိုတာ မလုပ်ရပါဘူးရှင်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျမကိုယ်တိုင်က ခါတိုင်းဆိုရင် သွားချည်ပြန်လှည့်လာနေတာ။ အခု ဒီ ၂ လ လုံးက သူ့အဖေ နေမကောင်းလို့ ကျမ အဲဒီမှာ လိုက်နေတာ။
မအင်ကြင်း။ ။ အဲဒီတော့ အာဏာပိုင်တွေက ကိုခက်သီကို လာပြီးတော့ ဖမ်းဆီးချိန်မှာ သူတို့ စွပ်စွဲသလို အထောက်အထားတွေရော တွေ့သွားလားရှင့်။
မချောစု။ ။ မတွေ့ပါဘူးရှင့်။ ကျမအိမ်ကို သူတို့ ရှာကြပါတယ်ရှင့်။ ဘာအထောက်အထားမှ မရှိပါဘူးရှင့်။ သူတို့က ကျမကို ရောက်ရောက်ချင်း ဘာပြောသလဲဆိုတော့ နှလုံးအဆို့ရှင်ပိတ်တယ်ဆိုလား၊ နှလုံးတက်ပြီးသေတယ်ဆိုလား ... မသိပါဘူး အဲဒါမျိုးပြောတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သူတို့ သတ်တာပဲနေမှာလို့။ အဲဒီလောက်ထိတောင် ရက်ရက်စက်စက် ရိုက်နှက်စစ်ပြီးမှ ရတာလား။ ဆေးရုံတက်ရုံလေးအထိ ရိုက်လို့မရဘူးလား။ ဒီလောက်အထိ အသတ်သေအောင်လုပ်မှ ရတာလားလို့ ကျမ သူတို့ကို ပြန်မေးလိုက်တယ်။
မအင်ကြင်း။ ။ အဲဒီတော့ သူ့ရုပ်အလောင်းကို မချောစု ကြည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သံသယဖြစ်စရာဘာတွေ တွေ့ရသလဲရှင့်။
မချောစု။ ။ ကျမ ကြည့်လိုက်တော့ ဒဏ်ရာ၊ ဒဏ်ချက်တွေလေ... တကိုယ်လုံး ရစရာမကောင်းဘူး။ ဗိုက်တွေခွဲထားပြီး ချုပ်ထားတာ၊ ရင်ခေါင်းကနေစပြီးခွဲထားတာ အကြီးကြီးပဲ၊ ကျမအထင်တော့ ကလီစာတွေထုတ်ယူလိုက်တယ်ထင်တာပဲ။ ခေါင်းတွေကလည်း ပေါက်နေတာ။ ကျမ ပုလဲရောက်တဲ့အထိ ခေါင်းမှာ သွေးမတိတ်သေးဘူး။ ပြီးတော့ ရင်ဘတ်မှာလဲ နံရိုးကျိုးထားတယ်ထင်တယ်။ သူက အသားဖြူတဲ့အခါကျတော့ သူတို့ ရိုက်ထားတဲ့ အရာက ကျန်နေခဲ့တာရှင့် ဝမ်းဗိုက်မှာ နံရိုးနားလေးမှာ။ နောက်ပြီး ပေါင်တွေမှာ လှန်ကြည့်တော့ မီးပူနဲ့ ကပ်ထားသလို ... သံပြားလေ အဲဒီလိုမျိုး အရာမျိုးပေါ့နော် တွေ့တယ်ရှင့်။ လက်တွေရော၊ ခြေထောက်၊ ခြေသလုံးတွေရော၊ တနေရာမှ မကျန်ပါဘူးရှင့် ... အကုန်လုံးရိုက်နှက်ထားတာ။ ဒီလိုကြီး ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက်တာ။
မအင်ကြင်း။ ။ အဲဒီတော့ အခုလေ... သူ့ကို ဘယ်သူတွေ ဖမ်းသွားသလဲ။ နောက်ပြီးတော့ အခု ဒီကိစ္စမှာ ဘယ်သူတွေမှာ တာဝန်ရှိသလဲရှင့်။
မချောစု။ ။ သူတို့ ပြောသံကြားလိုက်တာတော့ အဲဒီ G1 ဆိုတဲ့ဟာလည်း ပါတယ်ပြောတယ်ရှင့်။ G1 ဆိုတာ အဲဒီ စစ်တပ်ဘက်က ဘယ်ဟာလဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ G1 ဆိုတာလဲ ပါလောက်တယ်လို့ ပြောတယ်ရှင့်။ အယောက် ၁၀၀ လောက်ရှိတယ် လက်နက်တွေနဲ့ ထိုးချိတ်ထားတာ။ ကျမတို့ရော၊ ကျမမိသားစုရော၊ စစ်တပ်ရော၊ ရဲရော အများကြီးပဲ.... ဒီလို မတရားလုပ်ခံရလို့ ကျမတို့မှာ တိုင်စရာလည်း မရှိဘူး။
လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ခက်သီရဲ့ ဇနီး မချောစု ဗွီအိုအေကို ပြောပြသွားတာပါ။ မနေ့က ကဗျာဆရာ ခက်သီရဲ့ ဈာပန ကို ပုလဲမြို့မှာ မနေ့က ကျင်းပခဲ့ပြီး မြို့ခံလူထု ထောင်နဲ့ချီ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Tom Andrews ကတော့ ကဗျာဆရာခက်သီ ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့အတူ ၀မ်းနည်းကြေကွဲရတဲ့အကြောင်း တွစ်တာလူမှုကွန်ယက်မှာ ရေးသားပါတယ်။
သူတို့က ခေါင်းကို ပစ်တယ်၊ တော်လှန်ရေးက နှလုံးသားမှာ ရှိတာ သူတို့ မသိကြဘူးဆိုတဲ့ ခက်သီရဲ့ ကဗျာကို ကိုးကားရင်း Tom Andrews က ရေးသားခဲ့တာပါ။
ကှယျလှနျသူ ကဗြာဆရာခကျသီဇနီးနဲ့ VOA မေးမွနျးခကျြ
ကဗြာဆရာ ခကျသီဟာ သကျသအေထောကျအထားမရှိဘဲ အငျအားအလှနျအကြှံသုံး ဖမျးဆီးချေါဆောငျခံခဲ့ရတဲ့အပွငျ သူ့ရဲ့ရုပျအလောငျးကို ပွနျရခြိနျမှာ ပွငျးထနျလှတဲ့ ညှဉျးပနျးနှိပျစကျတဲ့ ဒဏျရာ၊ ဒဏျခကျြအမွောကျအမြားကို တှခေဲ့ရတယျလို့ ဇနီးဖွဈသူ မခြောစုက ဗှီအိုအကေိုပွောပါတယျ။ ရှဘေိုက ဇနီးဖွဈသူရဲ့ မိဘတှအေိမျကို ရောကျနခြေိနျ ကဗြာဆရာ ခကျသီကို မတျလ ၈ ရကျနေ့ ညနှောငျးပိုငျးမှာ အာဏာပိုငျတှေ ဖမျးဆီးချေါဆောငျသှားပွီးနောကျ နောကျနေ့ မနကျမှာ သူ့ရဲ့ရုပျအလောငျးကိုပဲ ပွနျရခဲ့တဲ့ အဖွဈအပကျြနဲ့ ပကျသတျလို့ ဇနီးဖွဈသူ မခြောစုကို မအငျကွငျးနိုငျက ဆကျသှယျမေးမွနျးထားပါတယျ။
မအငျကွငျး။ ။ မခြောစုရဲ့ ခငျပှနျး ကဗြာဆရာ သဆေုံးခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျမှာ ဖမျးဆီးခြိနျ ၂၄ နာရီအတှငျး သူဘယျလို ဖွဈသှားသလဲဆိုတာကို ပွောပွပါရှငျ့။
မခြောစု။ ။ ၈ ရကျနေ့ ည ၁၀ နာရီလောကျမှာ အဲဒီ စဈကားတှေ၊ ရဲကားတှနေဲ့ လာချေါတယျရှငျ့။ ကမြရယျ၊ ကမြခဲအိုရယျ၊ ကမြခငျပှနျး ကိုခကျသီရယျ သုံးယောကျ ချေါသှားတယျ။ ချေါသှားပွီးတော့ စခနျးရောကျတော့ ကမြတို့ကို တနရောစီပေါ့... ဓာတျပုံတှေ၊ ဘာတှေ ရိုကျပွီးတဲ့အခါကတြော့ ကမြကို တနရောမှာ စဈတယျ။ ကမြခဲအိုကိုကတြော့ တနရောမှာ မေးတယျ။ ကိုခကျသီကိုကတြော့ တနရောကို ချေါသှားပွီးမေးတယျ။ မေးပွီးတော့ ညကတညျးက ချေါသှားတာပေါ့နျော။ နောကျနေ့ ၁၀ နာရီကြျော၊ ၁၁ လောကျထငျပါတယျ... ကမြကို အပွငျချေါပွီးတော့ မေးစရာရှိလို့တဲ့။ ဟုတျကဲ့လို့ဆိုပွီးတော့... ကမြက ကမြကို စဈမေးမယျလို့ပဲ ထငျတာ။ ဒါပမေဲ့ အဲဒီအရာရှိကကတြော့ . (ကဗြာဆရာခကျသီ နာမညျအရငျးက ကိုဇျောထှနျး)... ကိုဇျောထှနျးက မုံရှာဆေးရုံရောကျသှားပွီတဲ့... ကမြက ဆေးတှေ၊ ဘာတှေ ကုလို့ရအုံးမယျထငျတာ။ ဒါပမေဲ့ မုံရှာသှားရမယျဆိုပွီးတော့ သူတို့ ရဲနဲ့ လှတျလိုကျ... ကမြတယောကျတညျးကို ချေါပွီးတော့။ ကမြက ဆေးရုံစောငျ့ရအုံးမယျထငျလို့ အဝတျအစားလေး ယူပါရစလေို့ ဆိုတော့... မယူနဲ့တော့တဲ့ သှားလိုကျတော့တဲ့.... အဲဒီရဲမှူးလား၊ မွို့နယျမှူးလားတော့ မသိဘူး။ သမေယျဆိုရငျတောငျ သူ့ထိုကျနဲ့ သူ့ကံဆိုပွီး ပွောလိုကျတော့ ကမြ ရငျထဲလနျ့တော့ လနျ့သှားတယျ။ ဟုတျပါ့မလားလို့... ဘုရားစာရှတျပွီး လိုကျသှားလိုကျတာ။ ဟိုလညျးရောကျရော မုံရှာဆေးရုံ အဝိုငျးပတျနားလေးမှာ ကားတစီးက လာကွိုတယျရှငျ့ ရှကေ့နေ လမျးပွပွီးတော့ ကမြတို့ကို။ ဆေးရုံလညျးရောကျရော ကိုခကျသီရဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ထုတျရအောငျလို့တဲ့ လကျမှတျထိုးပေးပါလို့ ဆိုပွီး ကမြကို လာခိုငျးတာတဲ့။ ကိုခကျသီကို သူတို့ဘာသာသူတို့ သဂွိင်္ုလျဖို့လုပျထားတာ။ ၂ နာရီ မီးရှို့သဂွိင်္ုလျမှာဆိုတော့။ ကမြကလညျး မဖွဈဘူးလို့။ သူ့အဖကေလညျး ၂၆ ရကျနကေ့မှ သထေားတာ။ အခုလောလောဆယျ သူ့အမကေို ကမြက ဘယျလို ရငျဆိုငျရမှာလဲလို့။ သူ့အမကေလညျး မကျြလုံးက မကျြမှနျခြှတျလိုကျရငျ လုံးဝ အကနျး၊ ဘာမှ မမွငျရတော့ဘူး။ အဲဒီလိုအမကေို ကမြက ဘယျလို ရငျဆိုငျရမှာလဲ။ သူ့သားကို မေးလာရငျ ကမြက ဘယျလို ဖွရေမှာလဲ။ သူတို့ ချေါသှားတုနျးက လူက အကောငျးကွီး၊ ပွနျလာတော့မှ ဒီခန်ဓာကိုယျကွီးက။ သူတို့ပွောတဲ့ မိုငျးဆိုတာ မလုပျရပါဘူးရှငျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ကမြကိုယျတိုငျက ခါတိုငျးဆိုရငျ သှားခညျြပွနျလှညျ့လာနတော။ အခု ဒီ ၂ လ လုံးက သူ့အဖေ နမေကောငျးလို့ ကမြ အဲဒီမှာ လိုကျနတော။
မအငျကွငျး။ ။ အဲဒီတော့ အာဏာပိုငျတှကေ ကိုခကျသီကို လာပွီးတော့ ဖမျးဆီးခြိနျမှာ သူတို့ စှပျစှဲသလို အထောကျအထားတှရေော တှသှေ့ားလားရှငျ့။
မခြောစု။ ။ မတှပေ့ါဘူးရှငျ့။ ကမြအိမျကို သူတို့ ရှာကွပါတယျရှငျ့။ ဘာအထောကျအထားမှ မရှိပါဘူးရှငျ့။ သူတို့က ကမြကို ရောကျရောကျခငျြး ဘာပွောသလဲဆိုတော့ နှလုံးအဆို့ရှငျပိတျတယျဆိုလား၊ နှလုံးတကျပွီးသတေယျဆိုလား ... မသိပါဘူး အဲဒါမြိုးပွောတယျ။ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ သူတို့ သတျတာပဲနမှောလို့။ အဲဒီလောကျထိတောငျ ရကျရကျစကျစကျ ရိုကျနှကျစဈပွီးမှ ရတာလား။ ဆေးရုံတကျရုံလေးအထိ ရိုကျလို့မရဘူးလား။ ဒီလောကျအထိ အသတျသအေောငျလုပျမှ ရတာလားလို့ ကမြ သူတို့ကို ပွနျမေးလိုကျတယျ။
မအငျကွငျး။ ။ အဲဒီတော့ သူ့ရုပျအလောငျးကို မခြောစု ကွညျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာ သံသယဖွဈစရာဘာတှေ တှရေ့သလဲရှငျ့။
မခြောစု။ ။ ကမြ ကွညျ့လိုကျတော့ ဒဏျရာ၊ ဒဏျခကျြတှလေေ... တကိုယျလုံး ရစရာမကောငျးဘူး။ ဗိုကျတှခှေဲထားပွီး ခြုပျထားတာ၊ ရငျခေါငျးကနစေပွီးခှဲထားတာ အကွီးကွီးပဲ၊ ကမြအထငျတော့ ကလီစာတှထေုတျယူလိုကျတယျထငျတာပဲ။ ခေါငျးတှကေလညျး ပေါကျနတော။ ကမြ ပုလဲရောကျတဲ့အထိ ခေါငျးမှာ သှေးမတိတျသေးဘူး။ ပွီးတော့ ရငျဘတျမှာလဲ နံရိုးကြိုးထားတယျထငျတယျ။ သူက အသားဖွူတဲ့အခါကတြော့ သူတို့ ရိုကျထားတဲ့ အရာက ကနျြနခေဲ့တာရှငျ့ ဝမျးဗိုကျမှာ နံရိုးနားလေးမှာ။ နောကျပွီး ပေါငျတှမှော လှနျကွညျ့တော့ မီးပူနဲ့ ကပျထားသလို ... သံပွားလေ အဲဒီလိုမြိုး အရာမြိုးပေါ့နျော တှတေ့ယျရှငျ့။ လကျတှရေော၊ ခွထေောကျ၊ ခွသေလုံးတှရေော၊ တနရောမှ မကနျြပါဘူးရှငျ့ ... အကုနျလုံးရိုကျနှကျထားတာ။ ဒီလိုကွီး ရကျရကျစကျစကျ သတျလိုကျတာ။
မအငျကွငျး။ ။ အဲဒီတော့ အခုလေ... သူ့ကို ဘယျသူတှေ ဖမျးသှားသလဲ။ နောကျပွီးတော့ အခု ဒီကိစ်စမှာ ဘယျသူတှမှော တာဝနျရှိသလဲရှငျ့။
မခြောစု။ ။ သူတို့ ပွောသံကွားလိုကျတာတော့ အဲဒီ G1 ဆိုတဲ့ဟာလညျး ပါတယျပွောတယျရှငျ့။ G1 ဆိုတာ အဲဒီ စဈတပျဘကျက ဘယျဟာလဲတော့ မသိဘူး။ အဲဒီ G1 ဆိုတာလဲ ပါလောကျတယျလို့ ပွောတယျရှငျ့။ အယောကျ ၁၀၀ လောကျရှိတယျ လကျနကျတှနေဲ့ ထိုးခြိတျထားတာ။ ကမြတို့ရော၊ ကမြမိသားစုရော၊ စဈတပျရော၊ ရဲရော အမြားကွီးပဲ.... ဒီလို မတရားလုပျခံရလို့ ကမြတို့မှာ တိုငျစရာလညျး မရှိဘူး။
လုံခွုံရေးတပျဖှဲ့ဝငျတှေ ဖမျးဆီးချေါဆောငျပွီး သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ ကဗြာဆရာ ခကျသီရဲ့ ဇနီး မခြောစု ဗှီအိုအကေို ပွောပွသှားတာပါ။ မနကေ့ ကဗြာဆရာ ခကျသီရဲ့ ဈာပန ကို ပုလဲမွို့မှာ မနကေ့ ကငျြးပခဲ့ပွီး မွို့ခံလူထု ထောငျနဲ့ခြီ လိုကျပါပို့ဆောငျခဲ့ကွပါတယျ။ ကုလသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ လူ့အခှငျ့အရေး အထူးကိုယျစားလှယျ Tom Andrews ကတော့ ကဗြာဆရာခကျသီ ကှယျလှနျခဲ့တဲ့အတှကျ မိသားစုနဲ့အတူ ဝမျးနညျးကွကှေဲရတဲ့အကွောငျး တှဈတာလူမှုကှနျယကျမှာ ရေးသားပါတယျ။
သူတို့က ခေါငျးကို ပဈတယျ၊ တျောလှနျရေးက နှလုံးသားမှာ ရှိတာ သူတို့ မသိကွဘူးဆိုတဲ့ ခကျသီရဲ့ ကဗြာကို ကိုးကားရငျး Tom Andrews က ရေးသားခဲ့တာပါ။